Wednesday March 13, 2019 - 11:10:09 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha dowladda Faransiiska ayay booqasho uga bilaabatay qaar kamid ah dowladaha dhaca bariga qaaradda Afrika oo qaar kamid ah Faransiisku horay ugumeysan jiray.
Emanwal Makron ayaa socdaalkiisi ugu horreeyay ka bilaabay wadanka Jabuuti oo uu kuyaal saldhigga ugu weyn ee Faransiisku uu ku leeyahay qaaradda Afrika halkaas oo uu kulan kula qaatay Ismaaciil Cumar Geelle iyo saraakiisha ciidamada Faransiiska ee Jabuuti ku sugan.
Gelinkii dambe ee shalay ayuu madaxweynaha Faransiisku gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya wuxuuna kulan laqaatay Abiy Axmed iyo mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Itoobiya.
Emanwal Makron ayaa Itoobiya lasaxiixday heshiis ku kacaya lacago Malaayiin dollar ah oo dhanka melleteriga ah gaar ahaan in Faransiisku uu gacan ka geysto dhismaha ciidamada Badda oo taariikhda markii ugu horraysay ay yeelanayso dowladda Itoobiya!
Falanaqeeyaasha ayaa sheegaya in ciidanka Badda ee Faransiisku udhisayo dowladda Itoobiya ujeedku yahay in lagu qabsado xeebaha dalka Soomaaliya, Itoobiya oo ah dowlad aan bad laheyn ayaa doonaysa in ay lawareegto badda Soomaaliya iyadoo boor isku qaris uga dhiganaysa heshiiskii Afarta dekadood ee ay lagashay Farmaajo hoggaamiyaha dowladda Federaalka.
Dhinaca kale madaxweynaha Faransiiska ayaa usii gudbi doono dhanka magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo heshiis dhanka melleteriga iyo dhaqaalaha ah kula geli doono madaxweynaha Kenya, Faransiiska ayuu damac uga jiraa in uu kusoo biiro loolanka ka socda geeska qaaradda Afrika oo kali ay ku ahaayeen Mareykanka iyo Shiinaha.